Wasiirka Isdhexgalka oo la kulmaya Muslimiinta | Somaliska
Wasiirka Isdhexgalka Sweden Erik Ullenhag ayaa la kulmaya xubno matalaya Muslimiinta Sweden ayagoo ka wada hadlaya xaalada Muslimiinta iyo sidii looga hortagi lahaa naceyb loo qaado Muslimiinta ka dib weeraradii Stockholm ka dhacay. "Qofkii jecel furnaanshaha iyo soo dhaweynta Sweden waxaa masuuliyad ka saarantahay in uu la dagaalamo neceyb loo qaado Muslimiinta Sweden ka dib weeraradii December. Waa inaanan ogolaan in ficilada hal shaqsi ay ka dhigto diin dhan dambiile" ayuu yiri wasiirka. Wasiirka ayaa sheegay in uu dareemayo arimo ay arday Muslimiin ah kala hadleen oo ay u sheegeen in ay dareemayaan cabsi kaga imaan karta cunsuriyiinta. Wasiirka ayaa sheegay in uu doonayo in uu dhageysto xaalada Muslimiinta asagoo sheegay haddii ay argagixisadu kala qeybiyaan dadka Sweden in ay guuleysteen.
Wasiirka Isdhexgalka Sweden Erik Ullenhag ayaa la kulmaya xubno matalaya Muslimiinta Sweden ayagoo ka wada hadlaya xaalada Muslimiinta iyo sidii looga hortagi lahaa naceyb loo qaado Muslimiinta ka dib weeraradii Stockholm ka dhacay.
“Qofkii jecel furnaanshaha iyo soo dhaweynta Sweden waxaa masuuliyad ka saarantahay in uu la dagaalamo neceyb loo qaado Muslimiinta Sweden ka dib weeraradii December. Waa inaanan ogolaan in ficilada hal shaqsi ay ka dhigto diin dhan dambiile” ayuu yiri wasiirka.
Wasiirka ayaa sheegay in uu dareemayo arimo ay arday Muslimiin ah kala hadleen oo ay u sheegeen in ay dareemayaan cabsi kaga imaan karta cunsuriyiinta.
Wasiirka ayaa sheegay in uu doonayo in uu dhageysto xaalada Muslimiinta asagoo sheegay haddii ay argagixisadu kala qeybiyaan dadka Sweden in ay guuleysteen.
aad ayuu umadsan yahay wasiirka waxuu sheegeyna waa runtiisa waa sax muslin dhan halnin macee been karo wadanka waa uu fiicaan yahay dadkana mawada xuma ee sweden ama shacabka eer svarige sidaas iyo nabad galyo war bixin fiican ayaan kaa sugeenaa sxb